Wuhan Pixel Box Cinema Cinema - Dhizaini magazini
Cinema "Pixel" ndiyo chinhu chakakosha chemifananidzo, Mugadziri anoongorora hukama hwekufamba uye pixel kuti ave musoro weiyi dhizaini. "Pixel" inoisirwa munzvimbo dzakasiyana dze cinema. Iyo bhokisi hofisi hofisi horo horo inovhara envelopu yakakomberedzwa yakavharwa neinopfuura zviuru zvitanhatu zviuru zvemapuranga. Iyo yekuratidzira kuratidzira madziro yakashongedzwa nehuwandu hukuru hwemwerekete mitsetse inobuda kubva pamadziro iri kupa zita rinonakidza reCinema. Mukati meiyi cinema, munhu wese angave nekunakidzwa nemweya wakakura wepasi rose wedhijitari inogadzirwa nekubatana kwezvinhu zvese zve "Pixel".
Zita rechirongwa : Wuhan Pixel Box Cinema, Vagadziri zita : One Plus Partnership Limited, Izita remutengi : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..